तल सूचीबद्ध गरिएको जानकारीले तपाईंलाई सबवे, बस र ट्याक्सीहरू जस्ता सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याहरूमा प्रतिक्रिया जनाउन मद्दत गर्नेछ, जसकारण तपाईं शहरहरूमा सुरक्षित र आनन्दमय रूपमा यात्र
तपाईंले सवारी साधन चलाउनका लागि अनिवार्य रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र हुनुपर्छ! के सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न झन्झटिलो र कठिन नै छ त?
यहाँ निम्न कुराहरूको बारेमा जानकारी दिइएको छ, जस्तै: तपाईंले चलाउने सवारीका लागिसवारी चालक अनुमतिपत्र कसरी प्राप्त गर्ने; तपाईंको सवारी चालक अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज हुँदा हुनसक्ने जरिवाना पोइन्टहरू; सवारी चालक अनुमतिपत्रको नवीकरण, आवधिक क्षमता जाँच; र तपाईंको सवारी चालक अनुमतिपत्र निलम्बन वा खारेज भएमा के गर्ने।